Ciidamada Xasilinta Amniga Muqdisho oo xiray sarkaal dagaal culus kala horyimid – Balcad.com Teyteyleey
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Xasbiga u taxaaabay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Booliiska Soomaaliya kaas oo dagaal kala horyimid Ciidamada Xasilinta Amniga xili ay howlgal ka wadeen agagaarka Beerta Jaadka degmada Hodan ee Gobolkaan Banaadir.
Sarkaalkaan Ciidamadu xireen ayaa waxaa lagu magacaabaa Korneyl Mahad Dollar,waxana isaga Ciidamo ilaalo u ah ay dagaal kooban la galeen Ciidamada Xasilinta amniga taa soo keentay Gurmad u yimid Ciidamada Xasilinta amniga islamarkaana ay xiraan Sarkaalka.
Xiliga uu dhacayay falka israasaaseenta ah ayaa waxaa socday howlgal ay Ciidamada xasilinta amniga ugu raad joogeen rag hubeesnaa oo fal dambiyeed ka geestay qeybo kamid ah Magaalada muqdisho balse ay la kulmeen ilaalada Korneyl Mahad Dollar,waxana dagaalkaas ay waxyeelo ka soo gaartay qaar kamid ah Shacabkii ku ag Ganacsanayay Goobta uu dagaalka ka dhacay.
Wararka ayaa sheegeysa in xiligaan la geeyay korneelka mid kamid ah Xarumaha Hay’adaha amniga islamarkaana ay ku socoto Su’aalo weeydiin halka warar kale ay sheegayaan in lagu xiray Xabsiga Godka Jilacoow ee Magaalada Muqdisho.
Dagaalada lala galayo Ciidamada Xasilinta amniga ayaa soo badanaya waayadaan tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay mamnuucday in Muqdisho lagu dhex wato Gawaarida ay saaran yihiin Hubka Waaweyn waxaana howlgalkaan dad badan ay sheegayeen in caqabad kale oo amni ay ka dhalan karto
Dhacdadaan weli kama hadlin Saraakiisha Ciidamada dowladda gaar ahaan Saraakiisha hoggaamineysa Ciidamada Xasilinta amniga Muqdisho oo dagaalka lagala hortagay,waxana xusid mudan in shalay sidoo kale Ciidamadaan ay dagaal ku galeen Xaafada Suuqaweyn ee degmada Wadajir ee Gobolkaan Banaadir.
The post Ciidamada Xasilinta Amniga Muqdisho oo xiray sarkaal dagaal culus kala horyimid appeared first on Ilwareed Online.
Khasaaraha Qarax Miino Oo Ka Dhacay Degaanka Galgala